Topnews:- Al Amriiki oo gurmad u diray Mukhtaar Roobow
04 July 2013 Waagacusub.com-Abuu Mansuur Al Amriiki oo ah hogaamiyaha Muhaajiriintii ka barbar dagaalami jirtay Maliishiyaadka Alshabaab ayaa dagaalyahana gurmada u diray Mukhtar Roobow oo la sheegay inay ku hareereeysan yihiin Maleeshiyo taabacsan Ahmed Godane.
Abuu Mansoor Al -Amriki oo Waagacusub u soo diray cod uu soo marsiiyay sendspace-ka wuxuu sheegay in Mukhtar Roobow uu ka helay hiil la xiriiray inuu afkiisa ku difaacay sidaas darteedna uu isaga ku difaacayo gaashaandhig si uu abaalgud uga dhigo. Halkaan ka dhageyso hadalkiisa.
Dagaalyahanada ajaanibtaa jooga Somalia ayaa sheegay inay xaqiiqsadeen in dilalkii loo geystay Salah Nabhan, Fazul Cabdalla, Bilal Berjawi, Cabdalla Suudaani, Aden Hashi Eyrow, Abu Quteyba, Cabdalla Suudaani, Ibrahin Afgan, Macalin Burhan inuu ka danbeeyay hogaamiyaha Kooxda Shabaab Ahmed Cabdi Godane. Abuu Mansuur wuxuu hadalkiisa ku sheegay in Ahmed Cabdi Godane u shaqeeyo Isreal,uuna qandaraas ku qabo dilida Mujaahidiinta Islaamka,.waxa uu ku sheegay .
Al Amriiki oo saldhig ka dhigtay Tuulada Raama cadeey ayaa guursaday gabar kasoo jeeda Beesha Hubeer ee Mirifle. Al-Amriki oo la rumeeysan yahay inuu gacan ka helay Al-Qaacida wuxuu tuulada Raama Cadeey iyo miyigeeda ka hirgeliyay Wireless Internet ,wuxuuna halkaas iskugu geeyay dhamaan ajaaniibta ALQAEDA Muhaajiriinta Alqaeda ee jooga Raamacadeey waxaa tira ka laba jeer weerar ku qaaday Maleeshiyo taabacsan Ahmed Godane,wuxuuna Al-Amriki sheegay inuu horkacayay nin lagu magacaabo Macalin Jinow.
Mukhtaar Roboow oo laga soo eryaday tuuladii hooyadiis degenayd ee gobolka Bakool ayaa maalmihii ugu danbeeyey ku dhuumaalaysanayey tuulada Habare oo aan sidaa uga fogeyn Magaalada Baydhabo, iyadoo Maleeshiyada Godane ku weerareen maalinimadii isniinta.
Mukhtar Roboow oo baxsada ayaa la sheegay inuu Al-Amriki weydiistay gurmad.waxayna warar hoose sheegayaan in loo galbiyay dhinaca Raamacadeey .
Al Amriiki ayaa Sheegay inuu shaki ka muujinayo muslinimada Ahmed Godane isaga oo ciidamada iyo dadka degaanka ka helay taageero kadib markii uu joojiyey lacago faro badan oo beeralayda iyo Xoolalayda ay ka qaadi jireen Kooxda ahmed Godane..
Al Amriiki ayaa ku faanay in hadda ka hor ay qoraal ay qoreen ay ku Difaaceen Mukhtaar Rooboow, Xasan Daahir, Ibrahin Afgaan iyo Fu’aad Shongale balse uu haatan isagu ku difaacayo muriqiisa.
Al Amriiki wuxuu fariintiisa codka ku sheegay in isaga iyo Muhaajirrinta la joogta joojiyeen wax uu ku sheegay Jihaad ay kula jireen Dawladda Federalka iyo Ciidamada AMISOM maadaama cadaw uga daran ka soo baxay dhexdooda. .
Isku soo wada duube waxaa muuqata in Kooxda Alshabaab iyo Ajaanibtii ka barbar dagaalami jirtay uusoo kala dhex galay kala qeybsanaan maraysa in kooxba kooxda kale ku sheegto Jawaasiis islaamka baabi’inaysa haatana khilaafkoodu uu faraha ka baxay.
Ahmed Godane ayaa ka taqalusay in badan ragii ay Dagaalka ay ku sheegeen jihaadka ay isla soo bilaabeen balse haatan labada koox oo finalka isla taagan iskuna hub aruursanaysa ayaa la sheegayaa inay kala hogaaminayaan Abuu mansuur Al Amriiki VS Ahmed Cabdi Godane, Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in labadaan kooxood uu dhex mari doono dagaaladii ay ku kala bixi lahaayeen.